Ngaba Ukuvela Ngokutsha Kukhona EBhayibhileni?
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikamba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMyanmar IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiPangasina IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTiv IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiUmbundu IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
Akunjalo. Akuveli kwanto ithetha ngokuvela ngokutsha eBhayibhileni. Inkolo yokuvela ngokutsha ivela kwimfundiso yokuba umphefumlo awufi. * Noko ke, iBhayibhile ifundisa ukuba umphefumlo ngumntu ibe uyafa. (Genesis 2:7,Hezekile 18:4) Xa umntu efile, akho nto ayaziyo.—Genesis 3:19; INtshumayeli 9:5, 6.
Yintoni umahluko phakathi kovuko nokuvela ngokutsha?
Imfundiso yeBhayibhile ngovuko ayisekelwanga kumphefumlo ongafiyo. Xa kukho uvuko, abantu abafayo baza kuvuswa ngamandla kaThixo. (Mateyu 22:23, 29; IZenzo 24:15) Uvuko lubangela kubekho ithemba lokubuyela kwihlabathi elitsha ekungayi kuphinda kufiwe kulo.—2 Petros 3:13; ISityhilelo 21:3, 4.
Ubuxoki ngokuvela ngokutsha noko kuthethwa yiBhayibhile
Ubuxoki: IBhayibhile ithi umprofeti uEliya wavela ngokutsha enguYohane umBhaptizi.
Inyaniso: UThixo wathi: “Ndithumela kuni uEliya umprofeti,” ibe uYesu wabonisa ukuba uYohane umbhaptizi wasizalisekisa esi siprofeto. (Malaki 4:5, 6; Mateyu 11:13, 14) Noko ke, le nto ayithethi kuthi uEliya wavela ngokutsha enguYohane umbhaptizi. UYohane watsho ngokwakhe ukuba akangoEliya. (Yohane 1:21) Kunoko, wenza umsebenzi ofana nokaEliya, eshumayela isigidimi sikaThixo sokuba abantu baguquke. (1 Kumkani 18:36, 37; Mateyu 3:1) UYohane uya ‘komelela ibe abe namandla njengomprofeti uEliya.’—Luka 1:13-17, iGood News Translation.
Ubuxoki: IBhayibhile ithi ukuvela ngokutsha kukuzalwa kwakhona.
Inyaniso: IBhayibhile ibonisa ukuba ukuzalwa kwakhona kukukholwa kuThixo kwaye kwenzeka umntu esaphila. (Yohane 1:12, 13) Oku kuzalwa kwakhona, ayonto yenzeka ngenxa yezenzo zangaphambili, kodwa yintsikelelo evela kuThixo, enika abantu ithemba ngekamva.—Yohane 3:3; 1 Petros 1:3, 4.
^ isiqe. 3 Inkolo yokungafi komphefumlo nokuvela ngokutsha ivela kwiBhabhiloni yamandulo. Kamva, iintanda-bulumko zamaIndiya zabhala imithetho yenkolo yobuKarma. IBritannica Encyclopedia of World Religions ithi, inkolo yobuKarma “ngumthetho wesenzo nomphumo waso ochaza ukuba into umntu ayenza ngoku, iza kuchaphazela ubomi bakhe xa evele ngokutsha.”—Iphepha 913.
Baninzi abantu abakholelwa ekuzalweni ngokutsha. Kodwa ngaba iBhayibhile iyafundisa ngako?